Paletwa – Travel Chin State
ပလက်ဝမြို့သည် ကုလားတန် မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် ( ၅၄ ) မီတာတွင် တည်ရှိပြီး ချင်းပြည်နယ်မြို့များထဲတွင် ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်းဖြင့် သွားရောက်နိုင်သော မြို့ဖြစ်ပါသည်။ ပလက်ဝမြို့၏ ရိုးရာများ၊ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် ရိုးရာအစားအစာများသည် ဧည့်သည်များကို စိတ်ကျေနပ်စေပါသည်။ ပလက်ဝမြို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော် နှင့် ချင်းပြည်နယ် မတူပီ-ဆမီးလမ်းမှ တစ်ဆင့် သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်အား ယခုအချိန်တွင် အသွားအလာကန့်သတ်ထားပါသည်။
Taham hawi khawn ne sy
[ Ta ham haw kani nay soih ]
Taham hawi kani thum ne sy
[ Ta ham haw kani htumh nay soih ]
Taham hawi kani kareu ne sy
[ Ta ham haw kani kaa reuh nay soih ]
Amang hawi sy
[ Ar mang haw soih ]
Noso hawi a?
[ No so hoy yar ]
Cha beaung bo a?
[ Ja beyaung bo yar ]
Hini maji rei mo?
[ Hini mayi ri mo ]
Mana leh tla mo?
[ Ma na lei tla mo ]
Sabawn pajau na a?
[ Sa bawng payak na o ]
Pahen kyh ba
[ Pa heing kyui ba ]
Kawn parai ba
[ Kom parai ba ]
Amang hawi sy ba
[ A mang haw sa ba ]
ကီမိုတောင်သည် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့မှ ( ၂၀ ) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး တင်ဘုန်းရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ပေ ( ၁၃၀၁ ) မီတာ၌ ရှိပါသည်။ ၎င်း၏ ထူးခြားသော လခြမ်းပုံသဏ္ဏာန်နှင့် တောင်ဧရိယာတလျှာက်အတွင်း သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ကျေးငှက်တိရစ္ဆာန်များ ပေါကြွယ်ဝသောကြောင့် လူသိများပါသည်။ တောင်အလယ်ရှိ စီးဆင်းနေသော ချောင်းအတွင်း ငါးမျိုးစုံ၊ ဖားငယ်များ၊ ပုစွန်များနှင့် တောင်ပေါ်တွင်လည်း အောက်ချင်းငှက်များ၊ တောင်လိပ်များကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။